Guddiga Doorashooyinka Oo Ururada Siyaasadda kala hadlaya Nidaaminta Maamulka iyo Maaliyadda Xisbiyada – Kalfadhi
Guddiga Doorashooyinka Oo Ururada Siyaasadda kala hadlaya Nidaaminta Maamulka iyo Maaliyadda Xisbiyada
Shirkan oo lagu gorfeynayay sidii xisbiyada siyaasadda ee kumeel gaarka ah u yeelan lahaayeen xeer-nidaamiye maamulka iyo maaliyadda ee xisbiyada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho.
Waxaa kasooqayb galay badi madaxda xisbiyada siyaadda ee isdiiwaan galiyey, Xubnaha Gudiga doorashooyinka, Sharciyaqaano & Haayadaha ka taageeraya hirgalinta barnaamijkan.
Ugu horayntii furitaanka shirka Saciid Xaashi Warsame oo ah xubin ka mid ah guddiga doorashada ayaa hadalo soodhaweyn iyo mahadnaq ah ka jeediyey isagoona sheegay in guddiga doorashadu ay garabtaaganyihiin xisbiyada siyaasadda kulankanna uu yahay kulankii afaraad afraad oo bil gudaheed ah loo qabto xisbiyada siyaasadda, Waxa uu kula dardaarmay in madaxda xisbiyadu ay hirgaliyaan talooyinka kana faaiideestaan fursaddan oo ay horumariyaan isbiyadooda dhanka maamulka maaliyadda si waafaqsan sharciga xisbiyada iyo sharciyada kale ee dalka.
Xubnaha kasocday xisbiyada siyaasadda ayaa iyaguna intii uu socday shirku waxa ay su’aalo la xiriira habka maaliyadeed ee xisbiyada laga doonayo waydiiyeen gudiga iyo sharciyaqaanada kaqayb galayey shirka.
Sharciga xisbiyada ee maamulka iyo maareynta nidaamka maaliyadda ayaa si aad ah looga dooday, waxayna xisbiyada siyaasadda ay talooyinkooda ugu biiriyeen xeerkan nidaaminaya maamulka iyo maaliyadda xisbiyada.
Xildhibaan Caraboow oo xalay ka badbaaday qarax ka dhacay Muqdisho